नाटक वार्ता : ‘रंगमञ्चमा लागिरहने पागल हौं’ - कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ७, २०७४-अशेष मल्ल ‘अवकाशको मुखैमा पुगेका’ नेपाली विषय प्राध्यापक हुन्। पद्मकन्या क्याम्पसमा नेपाली नाटकको सैद्धान्तिक पाठ पढाउने मल्ल अर्कातिर रंगमञ्चीय कक्षामा नाट्य लेखन/निर्देशनको जिम्मेवारीमा छन् । उनले स्थापना गरेको संस्था ‘सर्वनाम’ काठमाडौंमा व्यस्तमध्येको रंगमञ्च अखडा बनेको छ।
सर्वनामको आयु कति पुग्यो? यो कसरी बाँचिरहेको छ?
हो, भाग्य त छ। तर, अरू देखिने उपलब्धि के भएको छ र?
प्रकाशित: श्रावण ७, २०७४
‘प्रधानमन्त्री देउवालाई चकित पार्ने काम गर्छु’ ›